गोर्खाहरुका हितका लागि ज्यान दिन तयार छु : हिराधन राई
एभरेष्ट टाइम्सका लागि पत्रकार रोशन मेवाहाङ्गले एनआरएनए युके अध्यक्षका प्रत्याशी उम्मेदवार हिराधन राईसँग गरेको कुराकानी
एनआरएन अभियानमा कस्ता कस्ता योगदान र प्रतिबद्धताहरु छन् ?
एनआरएन बेलायतको स्थापनाकालदेखि नै सदस्य बनी एनआरएन अभियानमा सक्रिय सहभागी छु । गत २ वर्षदेखि एनआरएन बेलायतको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्दै आएको छु । गोर्खाहरुको जायज मागमा एनआरएनएलाई सक्रिय सहभागी गराउने कुरामा सक्रिय भूमिका निभाउँदै नेपाली नागरिकता निरन्तरताको अभियानलाई विशेष रुपमा अगाडि बढाउँदै लगेको छु । नेपालको नयाँ संविधानमा दोहोरो नागरिकताको प्रत्याभूतिको प्रयासमा जुट्ने मेरोे मुख्य प्रतिबद्धता हो ।
छैटौं अधिवेशनअघि विवादास्पद बनेको संस्थालाई कसरी नयाँ कार्यसमितिले सही बाटोमा लग्न सफल भयो ?
वर्तमान अध्यक्ष मुछेत्र गुरुङको नेतृत्वले विवादास्पद संस्थालाई सही बाटोमा लगिएको हो । नयाँ कार्यसमितिको कार्यावधिभित्र खेलेको भूमिकाको प्रशंसा र कार्यसमितिले गरेका कामका कारण एनआरएनए युके सही बाटोमा आएको छ । आगामी दिनमा समाजमा चुस्त र दुरुस्त काम गर्दै एनआरएनएलाई नयाँ आयामका साथ नेपालीका साझा संस्थाको मान्यतालाई स्थापित गराउन अहोरात्र खटिने प्रतिबद्धता जाहेर पनि गर्दछु ।
व्यावसायिक जीवन कस्तो लाग्छ ?
व्यक्तिले व्यक्तिगत एवम् व्यावसायिक रुपमा प्राप्त गर्ने सफलता र आत्मविश्वास नै व्यावसायिक जीवन हो । मेरोे भावी कार्यदिशा र पुराना नजिरहरुलाई मध्यनजर राखेर विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रमा हात हाले पनि सैनिक सेवाबाट अवकाशपश्चात बेलायतमै व्यवसाय सुरुआत गरे ।
बेलायती समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै नाइट क्लब, बार, रेस्टुरेन्टजस्ता व्यवसाय गर्दै कम्पनीको म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरका रुपमा समेत कार्य गरिसकेको छु । गोर्खा सेभिङ्ग फाइनान्सको संस्थापक सेयर होल्डरलगायत व्यवसायसंँगै अहिले पनि व्यावसायिक जीवनलाई अगाडि बढाइरहेको छु । व्यक्तिगत प्रगतिसँंगै जन्मभूमिप्रति आफ्नो उत्तरदायित्व छ भन्ने कुरा महसुस गरेर नेपालमा पनि कृषि, पशुपालन, हाउजिङ्गलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्दै अघि बढिरहेको छु ।
सामाजिक जीवन र सैनिक जीवनमा के भिन्नता देख्नु हुन्छ ?
‘एउटा बन्दुकको गोलीमा जीवन अगाडि बढाउनु नै सैनिक जीवन हो’ भने जस्तै नेपाली समुदायमा सामाजिक हितका लागि हरेक पल लडिरहनु सामाजिक जीवन हो । मेरो बुबा समाजसेवी र बुबाको आचरणलाई पछ्याउँदै सुरुदेखि नै सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय हुन पाउँदा बेलायत तथा जन्मभूमिमा समेत सक्दो प्रयास गरिरहँदा यो मनमा दुःखका अनुभूति भइरहन्छ । स्थानीय ग्रेटर रसमुर कम्युनिटीको संस्थापक खेलकुद प्रबन्धकको रुपमा संलग्नतालाई विभिन्न रुपमा निरन्तरता दिन मनमा लागिरहन्छ । समाजलाई खेलखुदसम्बन्धी प्रशिक्षण दिने पनि योजना छ ।
सामाजिक कार्य गर्दाको खुसीको क्षण ?
म किराँत राई यायोक्खा, बेलायतको संस्थापक सदस्य, खोटाङ समाज युके, मिसन टु हेल्प नेपाललगायत विभिन्न संघ संस्थाहरुमा सक्रिय रहँदा नेपालमा विनाशकारी महाभूकम्पले नेपाली जनतालाई पीडामा पारेको थियो । त्यस समय बेलायतमा नेपाल भूकम्प आपतकालीन अभियानको संयोजक भइ सहयोग रकम तथा सामग्री संकलन गरेर नेपाल पठाउने कार्य गरेँ । करिव दस हजार किलोग्रामसम्मका सहयोग सामग्री कार्गोमार्फत नेपाल पठाउन सफल हुँदा अत्यन्तै खुसी पनि लाग्यो ।
महाभूकम्पले तर्साएका नेपाली जनताका भावना बुझ्दै तुरुन्तै स्थलगत रुपमै ‘रोजिहिरा फाउन्डेशन’की सचिव श्रीमती रोजिना प्रधान राईसँग सहकार्य गर्दै सिन्धुपाल्चोकको दुर्गम भेग ‘इचोक’ क्षेत्रमा आफंै पुगी सामग्रीहरु वितरण तथा ‘चेन्ज फर हेल्थ’ नेपालसँग मिलेर संयुक्त रुपमा स्वास्थ्य सेवा शिविर सञ्चालन समेत गर्न सफल भएँ । त्यस्तै, एनआरएन बेलायतको उपाध्यक्ष पदमा रहँदा ‘रोजिहिरा फाउन्डेशन’द्वारा राष्ट्रलाई आपतकालीन अभियान बेलायत तथा ‘चेन्ज फर हेल्थ’ नेपालमा गरिएको राहत वितरण तथा स्वास्थ्य शिविरको नेतृत्व गरिएको क्षणलाई जीवनकै गौरवपूर्ण ठानेको छु ।
समाजमा अरु कस्ता योगदान पुर्‍याउनुभएको छ ?
बुवा मणिप्रसाद राईले छोरा पढेको गाउँको बासपानी माध्यमिक विद्यालयलाई प्रदान गर्नु भएको निःशुल्क जग्गामा हाल स्कुल सञ्चालन मात्र हैन, बुबाको पूर्णकदको सालिक समेत स्थापना गरिएको छ । यस कुरालाई थप प्रेरणाको रुपमा लिँदै ‘रोजिहिरा फाउन्डेशन’ स्थापना गरी गरिब असहायहरुका लागि स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आइरहेको छु । उक्त फाउन्डेशनका अध्यक्षको पद सम्हाल्दै गतवर्ष अपाङ्गता भएका खेलाडीहरुका लागि ह्विलचेयर संकलन तथा नेपालमा वितरण कार्यको संयोजन गर्नुको साथै दीक्षा चापागाईंद्वारा सञ्चालित पवित्र समाजसेवा नेपालका बालबालिकालाई आवश्यक सहयोग र मुस्कान समाजसेवामार्फत बाढीपीडितलाई रकम हस्तान्तरणजस्ता कार्यहरु उल्लेखनीय छन् ।
गतवर्ष नै ‘मिसन टु हेल्प नेपाल’ तथा नर्भिक अस्पतालसँगको सहकार्यमा खोटाङ बाक्सिलाका विभिन्न १५ गाविसका जनताहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच एवम् उपचारका लागि बृहत् स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन कार्यको संयोजन र वाग्मती सरसफाई अभियानमा पनि स्थलगत रुपमै सक्रिय सहभागी भएँ ।
संसारभर छरिएका गोर्खाहरुका लागि कस्ता अभियान र लडाइँ लडिरहनु भएको छ ?
गोर्खा हुनु आफैंमा गौरवानुभूति छ नै । साथै आफैं गोर्खा भएको नाताले पनि गोर्खाहरुको हक, हितका लागि सक्रिय रहनु, तत्कालीन गेसो अभियानमा सक्रिय भइ गोर्खाहरुका हक–हितका लागि सन् २००२ देखि बीजीडब्लुएसका संस्थापक सदस्यको रुपमा सक्रिय रहिरहेको थिए । अहिले बेलायतमा गोर्खाहरुका हकहितका लागि सत्याग्रह समूहको अभियानमा समेत सक्रिय सहभागिता जनाइरहेकै छु । यस सन्दर्भमा गोर्खाहरुका लागि र तिनका हकहितप्रतिको प्रतिबद्धतामा सधैं लडिरहने र गोर्खाहरुका हितका लागि ज्यान दिन तयार छु ।